MyHealthcare - Telemedicine | Get medical help anywhere anytime!
Vape သောက်သုံးခြင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ ပိုများလာကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ
လူငယ်တွေကြားမှာ အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ ဆေးလိပ်အစားထိုး e-cigarette သောက်သုံးခြင်းဟာ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ အပါအဝင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားကာ သေဆုံးမှုနဲ့ ဆပ်စပ်နေတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာက သုတေသီတွေက အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ လေ့လာမှု စစ်တမ်းတွေအရ အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၅၃၀ ကျော်ဟာ ဆေးလိပ်အစားထိုး Vape သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေရတာဖြစ်ပြီး ဒီထဲမှာမှ လူ ၇ ဦးခန့်ဟာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့လည်း စစ်တမ်းတွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။
လူအများစုဟာ e-cigarette တွေထဲမှာ အဆုတ်နဲ့ နှလုံးကို အဓိကအားဖြင့် ပျက်စီးစေတဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်မပါဝင်ဘူးလို့ ထင်ထားကြပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာတဲ့ သေဆုံးမှုဦးရေနဲ့ အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ e-cigarette တွေ အန္တရာယ် မကင်းဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
Vape သောက်သုံးတဲ့အခါ လျှပ်စစ်နဲ့ အပူပေးရှော့တိုက်ရတဲ့ အရည်တွေထဲမှာ နီကိုတင်းထက် ဆိုးရွားတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေအပြင် အဆုတ်နဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ Vitamin E acetate တွေလည်း ပါဝင်နေတာပါ။
အမေရိကန်ဆေးသုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ Vape ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း သောက်သုံးနေကြတဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတွေဟာ ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၄ နှစ်ကြားဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်စွဲတာကို ဖြတ်ဖို့ Vape သောက်သုံးရာကနေ Vape ကိုပါ ဖြတ်မရအောင် စွဲလမ်းနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း သောက်သုံးတဲ့ဦးရေဟာ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာတယ်လို့ သိရပြီး Vape သောက်သုံးနေသူ အများစုဟာ ချောင်းအပြင်းအထန် ဆိုးတာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ မောပန်းတာနဲ့ အသက်ရှုကြပ်တာ စတာတွေအပြင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဆုတ်နဲ့ နှလုံး ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ အသက်သေဆုံးနေတာလို့လည်း သိရပါတယ်။
“ဆေးလိပ်လိုလည်း အနံ့မပြင်းတဲ့အခါကျတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ အရာ တခုပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာကလည်း ဆေးလိပ်လို မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကြော်ငြာအားကောင်းကောင်းနဲ့ ကြော်ငြာနေကြတာလည်း ပါတာပေါ့”
“ဆေးလိပ်ရော Vape ရောက တခုမှ မကောင်းဘူးဆိုတာကို အဓိက သိစေချင်တာပါ။ စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း စွဲမသွားအောင် ကိုယ့်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ် ထိန်းကြပါ”လို့ သုတေသီခေါင်းဆောင် Scott Gottlieb က ဆိုပါတယ်။
Healthy Organization, provided by MyHealthcare
© 2018 ~ 2021 MyHealthcare. All Rights Reserved.